Njirimara, mbido na mkpa nke ala ndọta ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Haswa nwere a Neticwa ndọta ekele nke anyị ka dị ndụ. Neticdị magnet a na-agbasa site na mbara ụwa ruo n'èzí ma na mbara ebe ọ na-ezute ikuku anyanwụ. A makwaara ya site n'aha geomagnetic ma nye ya site na ego nke ọla ndị dị na ntọala ahụ, nke ikpeazụ nke akwa ụwa.
N’isiokwu a anyị ga-ahụ mkpa ọ dị magnetik nke ụwa, mbido ya, ọrụ ya na ihe na - eme ya ugbu a.
3 Njirimara nke ndọta ụwa
4 Mkpa nke ndọta
Ọ dị ka ọ bụ ụdị ndọta anyị nwere n'ime ụwa anyị. A na-emepụta magnetik site n'ụdị ọkụ eletrik nke na-esite na mmiri a na-akpọ convection nke dị n'ime ụwa. Mmiri eletrik ndị a na-eme n'ihi na n'ime oghere ahụ, e nwere nnukwu ego ọla dị ka ígwè na nickel. A na-akpọ usoro nke mmiri iyi na-ebugharị geodynamic.
Sayensị na-amụ ogologo ala ndọta ụwa a ogologo oge. 'Swa dị ihe dị ka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọnwa. O ruru ihe ruru 5.700 degrees Celsius, yabụ igwe fọrọ nke nta ka ọ dị ọkụ dị ka ihu Anyanwụ n’onwe ya Ebe ọ bụ na nrụgide nke ụwa ndị ọzọ na-arụ, anyị nwere ike ịhụ na igwe ahụ abụghị mmiri mmiri. Mpụta dị n’èzí bụ akwa oyi akwa ọzọ dị kilomita 2.000 nke nwere iron, nickel na ọla ndị ọzọ dị na mmiri mmiri. Nke a bụ n'ihi na nrụgide dị na mpụta mpụta dị ala, nke mere na ogo dị elu na-eme ka ọla a gbazee.
Ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide na ihe mejupụtara n'ime etiti dị na mpụga bụ ihe na-akpata ihe a na-akpọ ihe ntụgharị nke ọla a wụrụ awụ. Mgbe oyi, ihe ndị mmadụ buru ibu na-emikpu, na-ekpo ọkụ, ihe na-adịchaghị mkpa ga-amalite ịrị elu. Ọ bụ otu ihe ahụ na - eme na igwe ikuku na ikuku. Anyị kwesịrị ịgụta ya, mmetụta coriolis n'ihi ngbagharị nke ụwa ọ na-arụkwa ọrụ. N'ihi ya, E kere eddies nke na-agwakọta ọla ndị ahụ a wụrụ awụ.
Mmiri na-aga n'ihu nke mmiri mmiri mejupụtara ígwè n'ọtụtụ n'ime ya bụ ihe na-eme ka mmiri eletrik na-arụpụta, na n'aka nke ya, na-emepụta ebe magnet. Igwe eletrik na-ebufe na magnetik ndị a ma nọgide na-emepụta ike eletrik nke aka ha. N'ụzọ dị otú a, a na-eme ka okirikiri ahụ dịgide. A na-akpọ okirikiri zuru ezu na nke zuru oke geodynamic.
Ihe ike Coriolis na-akpata gburugburu nke na-eme ka ọtụtụ ebe magnetik kwụ otu ebe. Mmetụta a jikọtara nke eriri ndị a nile na-eme ka magnetik kpuchie ụwa.
Mgbe anyị na-ekwu maka oyi akwa nke ụwa ma ọ bụ ikuku nke metụtara ụwa ndọta, anyị na-ekwu maka ndọta. Ọ bụ mpaghara ikuku nke dị n'èzí, gbara mbara ụwa ahụ gburugburu, nke ikuku ndọta nke Earthwa a na-achịkwa ya kpamkpam. A na-enye ọdịdị nke magnetosphere site na ifufe anyanwụ nke na-akụ n'elu. Ifufe anyanwụ a na-eme ka akụkụ magnetosphere dị na ya gbasaa n'akụkụ nke ọzọ. A maara nnukwu mgbasawanye a dị ka "ọdụ magnet."
Ifufe nke anyanwụ bụ ọrụ kpakpando anyị bụ Sun. Nke a na-ebugharị ikuku a na radieshon na, ọ bụrụ na ọ banye na mbara igwe anyị, nwere ike imebi usoro mgbasa ozi nke ụwa kpamkpam. Ọ ga-abụ ọdachi maka afọ teknụzụ anyị bi na ya. GPS ga-ada, enweghị mkpuchi ekwentị, ebili mmiri redio ma ọ bụ telivishọn, wdg. Yabụ, n'ihi ịdị adị nke magnetosphere anyị na-echebe anyị.
Njirimara nke ndọta ụwa
Anyị ga-enyocha njirimara nke magnetik nke sayensị chọpụtara kemgbe ọtụtụ afọ yana ọtụtụ puku ọmụmụ banyere ya.
Ike nke ndọta magnet bụ nke dịkarịrị nso na akara akara na nke kachasị elu na okporo osisi.
Ngalaba dị elu bụ magnetopause.
Ihe ndọta ahụ na - arụ ọrụ n'ụzọ dị egwu n'okpuru ọrụ nke ikuku anwụ. Dabere na ọrụ ya, enwere ike ịpịkọta ya n'otu akụkụ ọzọ ma gbasaa na nke ọzọ, nke a na-akpọ ọdụ magnet.
Ugwu mgbago ugwu na ndida ya adighi ka ogwe osisi ala. Iji maa atụ, n’agbata poolu magnetik na ala ala ebe ihe dị ka ogo 11 dị iche.
Uzo nke uzo a ji nwayọ agbanwe ma ndi sayensi na-amu mgbanwe ya. Gha ahụ megharịrị kilomita 40 kwa afọ.
E nwere akwụkwọ ndekọ ọdịdị ala dị iche iche nke amụrụla ekele maka ụfọdụ mineral sitere n'oké osimiri, nke na-ekwu na ihe ndọta emewo ka ọ gbanwee kpamkpam ọtụtụ narị ugboro na narị afọ ise gara aga. Na ngbanwe a, mkpanaka ndị ahụ ga-adị na nsọtụ dị iche iche nke na ọ bụrụ na anyị ejiri compass nkịtị, ọ gaghị atụga ugwu, kama ọ ga-atụnye aka na ndịda.
Mkpa nke ndọta
Ya mere na i nwere ike ịhụ mkpa ndọta, anyị ga-akọwa ihe ọ na-arụ na ihe ọ bụ maka ịnwe ya na ụwa anyị. Obu ya na egbochi anyi mmebi nke ikuku anyanwu puru ibibi, dika anyi kwurula na mbu. N'ihi magnetosphere a, anyị nwere ike ịghọta ikuku anyanwụ site na ụfọdụ ihe ngosi mara mma dịka Aurora borealis.
Odudu magnet a bụkwa ihe kpatara anyị nwere ikuku. Ikuku bụ nke na-echebe anyị pụọ na ụzarị anyanwụ nke Anyanwụ na nke na-echekwa ọnọdụ okpomọkụ dị ndụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, okpomọkụ ga-adị n'etiti 123 degrees na -153 degrees. A ghaghikwa ikwu na otutu puku anumanu, tinyere umu dika nnunu na nduru, na-eji magnetik na-ebughari ma na-agbado onwe ha n’oge ha na-akwaga.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere magnetik ụwa na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Neticwa ndọta